2018 အတွင်း လူကြိုက်အများဆုံး အလှအပ ခွဲစိတ်ပြုပြင်မှုများ | CosmeticMyanmar
Home » Article » 2018 အတွင်း လူကြိုက်အများဆုံး အလှအပ ခွဲစိတ်ပြုပြင်မှုများ
ခုလတ်တလောမှာ ခေတ်စားနေပြီး မိန်းကလေးတွေတင်မဟုတ်ပဲ ပုရိဿတွေပါ စိတ်ဝင်စားလာကြတဲ့ အလှအပရေးရာလေးအကြောင်းဆိုရင် ဘာကိုအရင်ပြေးမြင်မိလဲ? ပြောရရင်တော့သတ္တိခဲတွေလို့တောင်တင်စားလို့ရတဲ့ ဆာဂျရီအကြောင်းပါ။ အပ်လေးထိုးမိတာတောင် ကြောက်တတ်တဲ့ မင်မင်ကတော့ ဒီအကြောင်းရေးဖို့တော်တော် အားယူလိုက်ရတယ်? ခုနောက်ပိုင်း တစ်အားကို ခေတ်စားလာပြီး ထမင်းစားရေသောက်လိုမျိုး ပြုလုပ်လာကြတဲ့ plastic surgery အကြောင်းလေးတွေဘက်ကို ဗဟုသုတလည်းရ လေ့လာလို့ရအောင် တင်ဆက်ပေးလိုက်တယ်နော်။
Plastic surgery ဆိုတာက အရင်တည်းကလည်း ရှိပါတယ်။ ပြောရရင် ခေတ်မစားသေးသလို ကြောက်လည်းကြောက်ကြတယ် စျေးတွေကလည်း ခေါင်ခိုက်တာကြောင့်ပါ။ ပြုပြင်တဲ့သူကလည်း နည်းသေးတာလည်း ပါတာပေါ့နော်။ ပြီးတော့ အဲ့လိုလုပ်ထားရင် လူတွေကရှက်တတ်ကြတယ် ဘာလဲတော့မသိ အဲ့ဒါရှက်စရာမဟုတ်ဘူးလေ။ ကိုယ့်ပိုက်ဆံအကုန်ခံပြီး ကိုယ့်ရဲ့ မလှတဲ့ အစိတ်အပိုင်းကို ပြုပြင်ထားတာလေ။ လှသွားရင် confident ရှိရှိနေရမှာမလား? ကဲ အခုခေတ်နဲ့တော့ ကွာသွားပါပြီ။ စျေးတွေကလည်း သက်သာလာသလို နည်းပညာတွေကလည်းအရမ်းမြင့်လာတာကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံမှာတင် လုပ်လာတဲ့သူတွေလည်း အများကြီးဖြစ်နေပါပြီ။ ခုဆို filler လိုမျိုး မနာကျင်ဘဲနဲ့ ခွဲစိတ်စရာမလိုဘဲနဲ့ ပြုပြင်လို့ရတာတွေတစ်ပုံကြီး ဖြစ်လာပြီဆိုတော့ သဘာဝဆိုတာတော်တော်ရှာယူရတယ်? အခုဆို ဟိုတလောလောက်ကမှဟိုးလေးတစ်ကျော်ကျော်ဖြစ်သွားတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက beauty blogger တစ်ယောက်ဆိုရင်လည်း ပြုပြင်လိုက်တာပေါ့နော်။ ဒါအဆန်းမဟုတ်တော့ပါဘူး။ မင်မင်ရာပြောချင်တာဘာလဲလို့မေးတော့မယ်ဆိုတာသိနေတယ်?
ပြောချင်တာကတော့ plastic surgery ထဲကမှ လူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်တဲ့ ပြုပြင်တာအများဆုံးဖြစ်တဲ့ surgery တွေအကြောင်းကို တင်ဆက်ပေးလိုက်တယ်နော်။ Surgery ဆိုတောကတော့ ပြောရရင် တစ်ကိုယ်လုံးကိုတောင်လုပ်လို့ရတယ်လေ။ Gender တောင်ပြောင်းလို့ရတဲ့အထိတိုးတက်နေတာဆိုတော့ ပြောစရာမရှိတော့ပါဘူးနော်။
ဒါကတော့ မိန်းကလေးတွေအတွက်ပါ ပြောရရင်တော့ကိတ်ချင်တဲ့သူလေးတွေပေါ့။ ရင်သားလှလှလေးပိုင်ဆိုင်ချင်သူတွေအများဆုံးလုပ်ကြတာပေါ့နော်။ နိုင်ငံခြားကဆယ်လီတွေကြည့်ပါလား? အတူတူပဲထင်ရတယ်? မိန်းကလေးချင်းတောင် လည်ပြန်ကြည့်ယူရတဲ့ရင်သားအလှကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်တာဆိုတော့လည်း စျေးကြီးကြီးတွေပေးလုပ်ကြတာမဆန်းပါဘူးနော်။ မင်မင်ကတော့ကြောက်တယ်ရယ်။
Bikini တွေ, ရင်သားဖော်ဝတ်ချင်တဲ့သူတွေ အများဆုံးလုပ်ကြတဲ့ အလှအပရေးရာခွဲစိတ်မှုတစ်မျိုးပါ။ လုပ်ပြီးရင်တော့တော်တော်တော့လှသွားတယ်??
ဒါကတော့ တော်တော်များများသိကြ ကြားဖူးကြတဲ့ အရာပါ။ သူကခွဲစိတ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုပေမယ့် အပ်နဲ့ထိုးတာပဲလေ။ အရေးအကြောင်းများတဲ့နေရာတွေ အသားရေကို ပင့်တင်ပေးပြီးတော့ ပြန်ငယ်ရွယ်သွားစေတဲ့ magic တစ်ခုပါပဲ။ ကောင်မလေးတွေတင်မကပဲ အသက်ကြီးတဲ့ အမျိုးသမီးတွေပါအကြိုက်တွေ့ကြပါတယ်။ ပြောရရင် အရေးအကြောင်းဆိုတာက အသက်အရွယ်တစ်ခုရောက်ရင် ထင်လာတတ်တာပဲလေ။။ အရေပြားတွေကို ဆွဲတင်းပေးသလိုက်သလိုဖြစ်စေတာဆိုတော့ သေချာတယ် ဒါကလူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်လောက်တယ်။
ခုနောက်ပိုင်းကို ရေပန်းစားလာတာပါ။ သူကခွဲစိတ်ရတာတော့မဟုတ်ပေမယ့် အရေပြားထဲကို ကြိုးသွင်းတာတို့ ဂျယ်လီချောင်းလိုမျိုးအရာလေးသွင်းတာပါပဲ။ နှာခေါင်းပြားသူတွေ, နှာတံမြင့်မြင့်လေးဖြစ်ချင်သူတွေလုပ်ကြပါတယ်။ သူကတော့ တစ်နှစ် သို့ 8 လလောက်ဆို နဂိုအတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားပါတယ်။ ပြောရရင် မခွဲစိတ်ချင်သူတွေ လုပ်ကြတာပေါ့နော်။ နှာခေါင်းခွဲစိတ်တာကတော့ အရင်ကဆို ကိုရီးယားမင်းသမီးလေးတွေလို ဖြစ်ချင်ကြတာဆိုပြီး ခွဲစိတ်ကြတာလေ။ အဲ့တုန်းကကြားဖူးပေမယ့် ဒီနိုင်ငံမှာလုပ်ဖူးတဲ့သူကလည်း မရှိသလောက်ရှားတော့ သိပ်မသိကြတာပါ။
တကယ့်ရေပန်းအစားဆုံးပါ၊ Kylie Jenner မွှေးလိုက်တဲ့မီးလို့ပဲပြောရတော့မှာပေါ့။ အရင်ကတော့ အိန်ဂျလီနာဂျိုလီပေါ့။ နှုတ်ခမ်းကိုထူထူလေးနဲ့ နှုတ်ခမ်းနီဆိုးလိုက်ရင်အပြည့်ဖြစ်နေပြီးတော်တော်လှတာပေါ့နော်။ Gloss လေးတွေများဆိုးထားရင်ရှယ်ပဲ။ သူများလုပ်ထားတာတွေကတော့လှနေတာပဲလေ။ အခုဆို lip filler တွေထိုးပြီးတော့ အသားကုန်ထော် အဲ အသားကုန်လှလို့ရပြီလေ။ ဒါကလည်း လူကြိုက်များပါတယ်နော်။
သူကတော့ အကိတ်တစ်လိုင်းတွေပါနော်။ တင်သားလေးကို လှချင်တာ swinsuit ဝတ်ရင်လှချင်တာ, ပြီးတော့ ပြောရရင် အခုလတ်တလော တွေ့မြင်နေရတာတွေကလည်း တင်ကိတ် ရင်ကိတ်တွေဆိုတော့ ဖြစ်ချင်ကြတာပဲလေ။ ဆီလီကွန်ထည့်တယ်, filler တွေထိုးကြတယ်ဆိုတာကလည်း အလှအပကို ဝါဿနာပါပြီးတော့ မြတ်နိုးကြတာပေါ့နော်။ ဘာတု ညာတုဝတ်စရာမလိုဘဲ လှနေဖို့အတွက် ရင်းရတာပေါ့နော်။
နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ ဆေးလိပ်ဖြတ်တယ်လို့တောင်ပြောနေကြတဲ့ V sahpe ပါ။ သူကတော့ ပြောရရင် ရေပန်းလည်းစားသလို သိသာတဲ့ ရလာဒ်ကြောင့်လဲ လူကြိုက်များကြတာပေါ့နော်။ မျက်နှာဆိုတာကတော့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ အသွင်အပြင်ကို ပေးတာဆိုတော့ လှမှဖြစ်မယ်လေ။ ဟုတ်တယ်မလား?
ဒါလေးကတော့မျက်ရစ်မရှိတဲ့ကောင်မလေးတွေ အကြိုက်တွေ့ကြတာပါ။ မျက်ရစ်လေးကို ပေါ်ပေါ်လွင်လွင်လေးဖြစ်သွားအောင် ဒါလေးက ပြုလုပ်ပေးနိုင်တာပေါ့။ မျက်ရစ်လေးကို ကြီးကြီးလေး ပေါ်ချင်တာလား? ပုံမှန်လေးပဲဖြစ်ချင်တာလား? နိုင်ငံခြားက မိတ်ကပ် bloggers တွေ ပညာရှင်တွေဆိုရင် သူတို့မျက်ရစ်ကို သတိထားကြည့်မိတာလေးတစ်ခုက မျက်ရစ်က တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အရမ်းညီနေတာပါ။ သဘာဝမျက်ရစ်လေးတွေဆိုရင် အရစ်ကတစ်ရစ်တည်းလည်း ဖြစ်မနေဘူး အနည်းဆုံး2ရစ်လောက်တော့ ဖြစ်နေတတ်ကြတယ်။ ပြီးတော့ သိသိသာသာကြီး ညီမနေပါဘူးနော်။
ကဲ ဒါလေးတွေကတော့ လိုက်လုပ်ဖို့ဆိုတာထက် ရေပန်းစားတဲ့ အလှအပရေးရာပြုပြင်မှုလေးတွေကို အချစ်တို့လည်း သိရအောင်မျှဝေပေးတာဆိုတော့ ကျေနပ်ကြမယ်ထင်ပါတယ်နော်။ ပြီးတော့လည်း ဒါတွေဆိုတာက အရေပြားတစ်ထောက်စာလေးတွေပါ။ အရမ်းကြီး ကြည့်ရဆိုးနေတဲ့ သူဆိုတာ တစ်ရာမှာတစ်ယောက်လောက်တောင်ရှိချင်မှရှိမှာပါ။ ဒါ့ကြောင့်သဘာဝအလှလေးကိုပဲပိုချစ် ပိုမြတ်နိုးတာကတော့ အကောင်းဆုံးပါပဲနော်။